Onweghi ndi ohu, ndi mmadu a hoputara, onweghi ala nke Chineke kwere na nkwa - AFRIKHEPRI
O nweghi ndi mmadu rapuru ohu, ndi a hoputara, o dighi ala Chineke kwere ha
N'ajụjụ ọnụ na Ki Zerbo, onye mbido mbụ nke History na Sorbonne
Lndị iro bụ ndị Ijipt na-efe chi Aten ofufe. Nke a bụ ihe ndị nchọpụta French abụọ chọpụtara. A hypothesis buru amụma, na narị afọ gara aga, site Champollion. Nchọpụta a ga-eme mkpọtụ. Ọ na-ewute ndị ọkà mmụta sayensị obodo ma na-akpaghasị ụwa okpukpe. A na-anụ kepu kepu na ndị nnọchi anya Steven Spielberg nwetara ikuku na ya n'ofe nke Atlantic nakwa na nnukwu ihe nkiri nwere ike ibute na enyo "Ihe nzuzo nke Ọpụpụ", ọrụ nke ndị nyocha Hibru abụọ (1).
The intuitions nke Sigmund Freud
Anyị na-asị Messod na Roger Sabbah? Ihe Lotois Jean-François Champollion ama ogologo oge tupu ha, eleghị anya, bịakwutere - o we nwua kwa n'oge na-aga na njedebe nke ihe o chere. Ihe psychoanalyst Sigmund Freud, e nwere iri isii, amamiihe nsinammuo, enyo enyo site banyere na odide ya, nchepụta nke nnyefe na Hibru site Moses Ijipt, ya onwe ya okpukpe, na nke chi Aten . Messod na Roger Sabbah gaa ọbụna n'ihu, na-azọrọ na ndị Juu niile bụ ụmụ nke ndị Ijipt oge ochie.
Ha na-adabere na nke mbụ: ọ dịghị ihe omumu nke ihe ochie nke ndị Hibru a dị ka a kọwara ha n'ime Akwụkwọ Nsọ. Nye ọtụtụ ndị ọkà mmụta, ha ga-abụ ndị a na-atụghị anya ha, maka enweghị ihe ọ bụla dị mma, nye "ndị obi ụtọ, Ọ nọ na-eche kemgbe afọ: olee otú ọnụ ọgụgụ ndị bi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara narị puku afọ na Egypt, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ abụọ gbapụrụ mba, usuu ndị agha ahụ? nke Fero n'ikiri ụkwụ ya, wee biri na "Ala Nkwa", mgbe Ijipt na-enye ya, n'enweghị ihe ọ bụla na-anọgide na-adịru ogologo oge ha, ma ọ bụ ọpụpụ ha? Enweghi ike ichota Abraham. Ndị agha ahụ amaghị maka ndị ọkà mmụta sayensị. Enweghị aha, ọ dịghị akụkọ, ọ dịghị ihe dị n'ime ụlọ nsọ, ọ dịghị ihe n'okpuru ájá nke ọzara.
The ọchịchị ọjọọ Pharaoh Ai
Ndị na-eme nchọpụta abụọ ahụ na-adabere na nkwenkwe ha na nchọpụta na-emenye ụjọ nke Akwụkwọ Nsọ, Hibru na ihe odide ihe odide. N'ílì Tutankhamen, meghere na 1923, bụ ndị e dere dere na iju hieroglyphics, ụfọdụ akwụkwọ ozi ndị tara - udi, pronunciation, atụ uru - mkpụrụ akwụkwọ Hibru. Ọfọn, n'oge ahụ, emeghị onye ọ bụla. Ọ bụla ọzọ karịa nke a: na a mgbidi nke ílì ahu, na abụọ "katrij (na kanyere signature) nke ihe aghọta Fero Ai, onye aha na hieroglyphs, yiri na na Aramaic Bible, Chineke mara Adonai (Aten-Ai). Na n'ọnụ ụzọ ọnụ ụlọ ahụ dị oké ọnụ ahịa, na-eche nche ncheta, dina n'elu igbe, nkịta Anubis (ma ọ bụ Anapi): n'asụsụ Hibru, "Nabi" pụtara "onye nlekọta nke iwu". A na-eji nkịta dị nsọ kpuchie Nkịta na obi na ekpere nke ekpere Hibru bụ shawl. A pụrụ iji obi akpọrọ ihe na "Igbe nke Ọgbụgba Ndụ ahụ" dịka a kọwara ya n'ime Akwụkwọ Nsọ.
Na - arụ ụka banyere ihe ndị a - e nwere ọtụtụ ndị ọzọ - ụmụnna Sabbah agụwo ihe odide ndị ahụ site n'elu ruo ala. Ha ghọtara na asụsụ Hibru sitere na ihe odide ndị e dere ede, nke e dere. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, a na-enwupụta ihe niile: akwụkwọ nke Akwụkwọ Nsọ, aha ndị na-adaghị adaba n'ihi na ndị mba ọzọ, ihe odide, akụkọ ihe mere eme.
Ka anyị laghachi 3350 afọ azụ. Akhet-Aton, isi obodo alaeze Ijipt - nke a maara dị ka Tell El Amarna - bụ obodo Fero Akhenaton ("Abụ m anyanwụ dị ndụ") na Queen Nefertiti. Ọ bụ obodo ọlaedo na ìhè, nke dị n'ebe ugwu nke Assiut ugbu a, na Naịl, ọ bụ obodo nsọ nke chi Aton, "chi pụrụ iche", onye kere eluigwe na ụwa. Akhenaten, n'eziokwu, agbajiwo chi nke ndị Ijipt, ọ na - achị dị ka nna ukwu zuru oke. Mgbe ọ nwụrụ, Ai, bụ onye ka bụ nnukwu onye nchụàjà - emesia ọ ga - abụ Fero n'okpuru aha "Nna Chineke" - na - ewepụta ike, na - eme ka ọchịchị ahụ ruo mgbe Tutankhamun (ọ karịa afọ asatọ) tolite.
Mgbe ahụ, ihe niile na-ada ada: Amọn, chi dị iche iche, weghachitere nna nna ochie, ọ bụ nlọghachi na orthodoxy. Ai Tutankhamun ga-hụ na a na-ehichapu nile nke a ọjọọ dakwasịrị Akhenaten ahapụ ọzọ nke mba ná nhụsianya, na chi a Aton onye kpọsara na ndikom-hà na na ọ bụ nanị ọdịiche dị ajọ omume!
Obodo, Iden a (nke a bụ "paradaịs a na-atụghị anya ya"?) A ga-agbahapụ ngwa ngwa, tupu ya, emesịa, kpam kpam. A chụpụrụ onye ọ bụla: ndị nchụàjà Aton, "Yadud", bụ ndị ga-etolite alaeze Juda, ndị odeakwụkwọ, ndị a ma ama, ndị ọkachamara, na, ndị ha, ụmụ ntakịrị, "nnukwu peat" nke na-ekwu okwu Akwụkwọ Nsọ, Israel n'ọdịnihu (onye Ijipt, "nwa Ra na Chineke") ndị ga-ebuso Juda agha.
Na akpa ha, ha na-eburu okwukwe okpukpe ha - nke mbụ n'ime akụkọ ihe mere eme mmadụ - ọdịnala ha. Mgbe ọtụtụ afọ nke na-agagharị agagharị na esemokwu, ndị a "ndị Ijipt" ga-eji "ihe odide Hibru" na-ede ihe ma chekwaa afọ ole na ole. Ai gburu umu nnunu abua na otu nkume: o wepuola onwe ya ndi ndu ndi mmadu a na-adighi ike ma wepu ya dika "ebe nchekwa" megide ndi Het, onye iro nke ugwu!
Site na "paradaịs"
Ihe omume nke oke njem a, ụgbọ elu, na n'ebe ndịda, nke ndị uwe ojii nke Pharaonic gụnyere nke Nubians, "Medzai" ("nwa nke Ai"). Na Kenya, a maara na, ndị Masai taa na-ekwu na ha bụ chi pụrụ iche, na-eme ka afọ ole na ole ha dị, n'ebe ugwu, ma na-eyi ihe ịchọ mma nke na-emetụ ihe nnọchianya dị nsọ nke Ijipt oge ochie ...
Ọtụtụ narị afọ mgbe nke a The Epic, agwa anyị Messod na Roger Sabbah, ndị odeakwụkwọ n'oge ije biri na Babilọn, iyi onye iro nke Egypt, ga-ede a ederede, na Bible, gbanwetụrụ ọtụtụ ugboro ebe agaghịkwa na-egosi na anya na ihere nke ndi Ijipt, bu ebe aha ndi adi. Mgbe ahụ, Abraham chọpụtara na a mụrụ ya na Mesopotemia!
Sarah, ọ bụ Nefertiti
Na ihe niile na-eme, maka ndị na-eme nchọpụta anyị abụọ: akụkọ oge nke Fero, ndụ ha, omume ha, akụkọ Bible na Ijipt. Abraham ("Ab-Rah-Am", nna nke chi Ra na Amon)? Ọ na-e Akhenaten onwe ya a na Akwụkwọ Nsọ Abraham esote onye Chineke na-ekwu, na-ajụ polytheism ma gbuo ebule kama nwa-ya Isaak (Pharaoh Semenkharé, Ijipt Saak- Ka-Ra? ); na Akhenaton nke ọzọ, onye ya na Aton na-akparịta, na-agbagha chi, na-achụrụ ebule (Amon). Sarah, ọ bụ mara mma Nefertiti, Agar, ọ bụ Omar, nwunye nke abụọ. Moses ("Meses")? Ọ bụ Ramses I, onye agha, na-achọsi ike. Aaron? Ọ bụ Horemheb, n'ozuzu mgbe ahụ. Joseph? Ọ bụ Ai: e liri ha na "ndị Farisii nke Ijipt" na ha na-atụ egwu ha ...
O nweghi ndi mmadu mere ka ha di ohu, obughi "ndi a hoputara", obughi ala nke Chineke kwere ha nkwa: oburu na o juru ha anya - ogagh adi ya - nka aputaghi okwukwe nke Messod na Roger Sabbah, site na akara nke ndị rabaị: ha na-emesi obi ike ịbụ ndị kwere ekwe mgbe niile.
Ihe nzuzo nke Ọpụpụ: Mmalite nke Egypt nke Ndị Hibru
8,90€ dị na ngwaahịa
2 ọhụrụ site na 8,90 €
Ejiri 6 € 5,65 mee ihe
dị ka Mee 24, 2020 4:38
Part Number 9782253154990
Ụbọchị mwepụta 2003-09-10T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2003-09-10T00:00:01Z
Atiya OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ
Ọ bụ mmalite nke Africa nke nwoke Vitruvian
Ọgwụgwọ nke mmalite nke rumba
Ọmụmụ ihe ọmụmụ Russia na-egosi na GMOs ga-eme ka mmadụ kwụsị ịdị ndụ mgbe ọgbọ atọ gasịrị
Amụma nke Nostradamus banyere agha ụwa nke 3e